ဘဝသစ်လေးများအတွက် ဆစ်မီတဝေ့၏ ရန်ပုံငွေ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဘဝသစ်လေးများအတွက် ဆစ်မီတဝေ့၏ ရန်ပုံငွေ
ဘဝသစ်လေးများအတွက် ဆစ်မီတဝေ့၏ ရန်ပုံငွေ အသင်းအဖွဲ့ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးငယ်လေးများအတွက် အရည်သွေးမြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများပေးရန် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာရှင်များ၏ရက်ရောစွာလှူဒါန်းသော ထောက်ပံငွေကြေးများ၊ ဆစ်မီတဝေ့မှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများ၏ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ကူညီမှုကြောင့် နှလုံးရောဂါ ကလေးလူနာများ (သို့) ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသမှုလိုအပ်သော ကလေးလူနာများ၏ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် ကျရောက်မည့် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ သက်တော် ၈၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တော်တွင် ဘဝသစ်လေးများအတွက် ဆစ်မီတဝေ့၏ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်းမှ ကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေးသောဝေဒနာခံစားရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးငယ်ပေါင်း ၈ယောက်ကို ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ရန်မျှော်မှန်းထားလျှက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အရည်သွေးမြင့်မားသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် အကြမ်းဖျင်း ကလေးငယ်ပေါင်း ရ၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ ဟာ မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းမှု ရောဂါဝေဒနာဖြင့်မွေးဖွားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ၄င်းတို့အထဲမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူနိုင်ပဲ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။ ကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေးရောဂါကို မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များတွင်လည်းတွေ့ရှိရသလို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင် လည်းတွေ့ရှိရ တတ်ပါတယ်။ ကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေးရောဂါခံစားရသော ထိုင်းကလေးပေါင်း ၁၀၀၀၀ ဟာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကုသမှုမခံ ယူပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကလေးငယ်၏ နှလုံးနှင့် အဆုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ထိရောက်ကာ အသက်သေဆုံးနိုင်သည့်အထိဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသမှုလိုအပ်နေသော ကင်ဆာရောဂါနှင့် အခြားသော မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါများခံစားနေရသော ကလေးပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိနေပြီး သူတို့လေးတွေဟာ ဆေးကုမှုခံယူရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အဓိကကင်ဆာအမျိုးအစား ၁၀ မျိုးထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးမှာ အသွေးကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကလေးငယ်လေးများနဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့မိသားစုများကို ကျန်းမာသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးချင်တယ်။သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝကို လဲ တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လေး တွေကို ဘဝသစ်နဲ့ တောက်ပတဲ့မျှော်လင့်ချက်များပေးချင်ပါတယ်။” လို့ Dr. Chanika Tuchinda, ဆစ်မီတဝေ့ ဆီရီနာကရင်ဆေးရုံ ဥက္ကဠ၊ ဆစ်မီတဝေ့၏ နှလုံးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်း၏ ဥက္ကဠ မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးတွင် အထူးကျွမ်းကျင်သော ပါရဂူများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ၊ အရည်အသွေးမြင့် ခေတ်မီသော စက်ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများ ဖြင့်ကလေးငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင် ရန်အဆင်သင့်အမြဲရှိနေပါတယ်။
Dr. Suradej Hongeng, Prof., M.D., ဆစ်မီတဝေ့ ကလေးဆေးရုံကြီးတွင်မှဦးဆောင်သော အထူးကျွမ်းကျင်သာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော အထူးစက်ကိရိယာများ၊ ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန် Postivie Pressure အခန်များ၊ ထို့အပြင် သွေးကင်ဆာ၊ မွေးရာပါသွေးအားနည်း ရောဂါ၊ Lymphoma နှင့် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ရောဂါများ ခံစားနေရသော ကလေးသူငယ်လေးများ၏ ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကို ကယ်တင်နိုင်ရန်၊ဘဝသစ်လေးများအတွက် ဆစ်မီတဝေ့၏ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ အဖွဲ ့အစည်းမှတစ်ဆင့် ကလေးပေါင်း အယောက် ၁၀၀ကျော်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ၄င်းကယ်တင်ခဲ့သော ကလေးငယ်များ၏မိဘများထံမှကြားရသော ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပိတိဖြစ်ရသောစကားသံများ
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ ကိုခံစားရတယ်ကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်မကလေး မှာဘာတွေဖြစ်မလဲ ကျွန်မတွေးခဲ့တယ်။Dr. Thaworn, Dr. Nattipat နဲ့သူနာပြုများ ကျွန်မသမီးလေးကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာ ပါဝင်ကူညီ ကြတဲ့သူအားလုံးကို ကျွန်မကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုရင်သမီးလေးဟာ အခုဆိုရင်ကျန်းမာပျော် ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ကျွန်မရုံးပိတ်ရက်တွေ ကို ဆေးရုံမှာ အချိန် ကုန်စရာမလိုတော့ပဲ တခြားနေရာမှာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
အသက် ၉ လအရွယ်တွင် ရန်ပုံငွေအဖွဲအစည်မှ တစ်ဆင့်နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူခဲ့သော သမီးငယ် လေး၏မိခင် Sirapapat (Chicha)
ကျွန်မ ပထမဆုံးသားလေးနှလုံးအစို့ရှင်ကျဉ်းတယ်လို့ကြားတဲ့အခါကျွန်မသူ့ကိုဘယ်လိုကယ်ရမလဲအရမ်းစိတ်ပူ ခဲ့ရတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ကျွန်မကလေးကို ဘဝသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ အနာဂတ်တစ်ခု ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ။ သူအကောင်းဆုံးခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာကလွဲလို့ကျွန်မဘာမှမပြောတတ်တော့ပါဘူးရှင်
နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူခဲ့တဲ့ Tosawat ၏ မိခင်က ပရဟိတအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ခြင်း
ဆစ်မီတဝေ့ ဆီရီနာကရင်၊ ဆူခွန်ဗစ်၊ ဆီရချာ ရှိငွေရှင်းကောင်တာများတွင်ထားရှိသော အလှူခံ ပုံးများတွင် လှူဒါန်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
See more miracles – follow us on Instagram #SamitivejHasHeart
Kanchana Kanchanangkoonpan, D.D.S.
Assistan professor Pear Pongsachareonnont, M.D.